Asalaamu Calaykom Waraxmatullaahi Wabarakaatuh.
Dhismaha uu dhisanyahay Blog-gayga ayaan inshaAllah ka bixin sharaxaad
Halkan waxaan ku sheegayaa qofka Blog-gan leh. Sidoo kale ujeedada loo sameeyay Bloggan.
Waa maxay Musdhlaxul xadiith
Halkanna waxaan ku sharaxayaa cilmiga xadiiska waxa uu yahay.
Kutubta Musdhlaxul Xadiithka
Halkan waxaa ku jira kutubta ogu caansan ee laga qoray Musdhalaxul Xadiithka
Halkan waxaan soo geliyaa Waxii dersi ah ee ku saabsan Musdhlaxul Xadiithka. Sidoo kale waxaan soo geliyaa Axaadista dhaciifka qaar. Waxaa kale oo aan meesha soo geliyaa akhlaaqaha laga rabo qofka Cilmiga raadinaya. Guud ahaan maqaalada ku saabsan Musdhlaxul Xadiithka.
Taariikhda Muxadithiinta Casrigan
Halkan waxaa ku jira culimada muxadithiinta ah taariikhdooda. Culimadaas oo noolaa ama nool weli casrigan
Halkan waxaan soo geliyaa taariikhda Culimada la isku yidhaahdo “asxaabu sittah” oo kooban. Waxayna kala yihiin Culimadaasi: Imaam Bukhaari, Imaam Muslim, Imaam Nisaa’i, Imaam Tirmidi, Imaam Abuu Daa’wuud iyo Imaam Ibnu Maajah.
Halkan waxaan soo geliyaa taariikh nololeedka culimada soomaliyeed . Culimadaas oo isugu jira kuwa Muxadithiin iyo kuwa culuumta kale ku takhasuusay. Sidoo kale culimadan oo isugu jira kuwa nool iyo kuwa dhintay.
Taariikhda Culimada Xadiithka
Halkan waxaan soo geliyaa guud ahaan culimada lagu bartay Cilmiga Xadiithka taariikhdooda. Culimadaas oo ah kuwa leh kutub musdhalax ama guud ahaan kutubta axaadiista laga barto.
Gabdho/Dumar alifay kutub
Halkan waxaan soo geliyaa turjumaad gaaban oo ku saabsan dumar muslimiin ah oo alifay kutub.
Duruus Musdhalaxa ee Youtube.com
Halkan waxaan soo geliyaa duruus video ah oo ku saabsan Cilmigan xadiiska.
Halkan waxaa ku jira kutub xoogaa ah , kuwaas oo aan xajmi weynayn. Sidoo kale rasaa’il yaryar ayaan soo geliyay.